नेपाल-भारत पेट्रोलियम पाइप लाइनको ओली र मोदीद्वारा 'स्वीच' थिचेर उद्घाटन
नेपाल-भारत पेट्रोलियम पाइप लाइनको ओली र मोदीद्वारा ‘स्वीच’ थिचेर उद्घाटन
काठमाडौँ, २४ भदौ । बहुप्रतिक्षित अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजनाको मंगलबार समुद्घाटन गरिएको छ । भारतको मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म बिछ्याइएको सो पाइप लाइन परियोजनाको नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरूपमा आ-आफ्नो मुलुकबाट ‘स्वीच’ थिचेर समुद्घाटन गरेका हुन् ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित सो कार्यक्रममा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायत नेपाल सरकरका उच्चपदस्थ अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो। रासस
शेयर बजार : नेप्सेमा २४ अङ्कको वृद्धि
सुनको मूल्य ५ सय बढ्यो, तोलामा कति पुग्यो ?
झोला र पोकामा चिनियाँ सामान आयात गर्न प्रतिबन्ध !
आज फेरि बढ्यो सुन, तोलाको कति ?
२५७ वटा अवैध खसी नियन्त्रणमा
सुन प्रतितोला ७५ हजार रुपैयाँ